Indlela abaThengisi be-imeyile abasebenzisa ngayo uhlalutyo oluqikelelweyo ukuze baphucule iziphumo zabo ze-Ecommerce | Martech Zone
Indlela abaThengisi be-imeyile abasebenzisa ngayo uhlalutyo oluqikelelweyo ukuze baphucule iziphumo zabo ze-Ecommerce
NgoLwesihlanu, Februwari 25, 2022 NgoLwesihlanu, Februwari 25, 2022 Prasanna Chitanand
Ukuvela kwe Uhlalutyo oluqikelelweyo kwintengiso ye-imeyile sele idumile, ngakumbi kwishishini le-ecommerce. Ukusebenzisa itekhnoloji yokuthengisa kwangaphambili inamandla okuphucula ukujolisa, ixesha, kwaye ekugqibeleni uguqule ishishini elingakumbi nge-imeyile. Le teknoloji idlala indima ephambili ekuchongeni ukuba zeziphi iimveliso abathengi abanokuthi bazithenge, xa banokuthenga, kunye nomxholo olungiselelwe wena ozakuqhuba umsebenzi.
Ukuxela kwangaphambili urhwebo sisicwangciso esisebenzisa idatha yokuziphatha yangaphambili ukuxela kwangaphambili ukuziphatha kwexesha elizayo. Idatha, uhlalutyo, kunye neendlela zokulinganisa kwangaphambili zisetyenziselwa ukumisela ukuba zeziphi izenzo zokuthengisa ezinokuthi ziguqulwe ngokusekelwe kwiiprofayili zabathengi kunye nokuziphatha. Loo datha idlala indima ephambili ekwenzeni izigqibo ezihlakaniphileyo. Xa isetyenziswa kwintengiso ye-imeyile, i-algorithms inokukunceda ukuba ujolise kubaphulaphuli abafanelekileyo, uphucule ukubandakanyeka, uvelise uguqulo oluninzi, kwaye wenze ingeniso engakumbi kumaphulo e-imeyile.
Yintoni i-Predictive Analytics?
Ukuxela kwangaphambili kubahlalutyi yinkqubo ejoliswe kwidatha esetyenziswa ngabathengisi ukuqonda ukusebenzisana kwabathengi kumaphulo adlulileyo kunye nomsebenzi wesayithi onokuqikelela ukuziphatha kwexesha elizayo. Uhlalutyo oluqikelelweyo luluncedo ekudaleni iikhankaso zokuthengisa ezizezakho nezifanelekileyo. Kuba email marketing iingcali, amanqaku edatha eqikelelweyo abonelela ngemibono kunye namathuba okuziphatha kwabathengi abanje:
Inokwenzeka ukuba ujike okanye uyeke ukubhalisa
Ixesha elililo lokuthenga
Iimveliso ezifanelekileyo okanye iindidi zemveliso
Lilonke ixabiso lobomi bomthengi (CLV)
Le datha inokukunceda wenze izicwangciso, iimeko zokuvavanya, okanye uzenze ngokuzenzekelayo ukuthumela umyalezo ofanelekileyo ngexesha elifanelekileyo. Nalu uqikelelo olunokuba luncedo ekuphuculeni umyalezo, kunye nokulinganisa ukusebenza kwe-imeyile iyonke.
Ukuthenga injongo -Ukuqonda ukuba undwendwe lunokuthenga kangakanani kunokukunceda ukuba uqhubele phambili kwaye uhambise umxholo ochanekileyo kumyalezo wakho. Abakhenkethi abanomgangatho ophezulu womdla banokuguquka, kwaye ukugcina izaphulelo zakho kubafowunelwa abanjalo kuya kuqhuba i-LTV.
Umhla oqikelelweyo wentengo ezayo -Uluhlu oluphakathi kunye nee-ESP ezinobugocigoci kakhulu ziyakwazi ukudibanisa iindlela zokuthenga zoqhagamshelwano kwaye ulindele ukuba zingabeka nini iodolo yazo ezayo, ekuvumela ukuba uhambise ngokuzenzekelayo i-imeyile enemveliso ecetyiswayo ngexesha elifanelekileyo.
Imveliso oyithandayo okanye udidi lwemveliso -Ukuchonga imveliso okanye udidi lwemveliso olukhethwa kakhulu ngumsebenzisi ngamnye kukuvumela ukuba uvelise ngcono ii-imeyile zakho ngemveliso ekhethwa ngabo.
Kulindelwe ixabiso lobomi bomthengi (I-CLmV) - Ngokujonga ixabiso lembali lomthengi, ukuphindaphinda kwakhe ukuthenga, kunye nomhla olindelekileyo wokuthenga kwakhona, ixabiso eliqikelelweyo lobomi linokuveliswa. Olu hlalutyo lukunceda ukuba uqonde ukuba ngubani phakathi kwabathengi bakho oyena unyanisekileyo okanye mhlawumbi ukuguqula ngexabiso eliphakathi eliphezulu (I-AOV).
Ukuphumeza uhlalutyo oluqikelelweyo kwiphulo lakho lokuthengisa i-imeyile liya kwenza ukuba imikhankaso yakho ibonakale ngakumbi, ifanelekile, kwaye ifike ngexesha - ukuphucula ingeniso yakho.
Ngaba i-Predictive Analytics ifumana njani iMomentum?
Zombini imarike yohlalutyo olumiselweyo kunye nengqikelelo yayimi kwi-USD 10.01 yezigidi ngo-2020 kwaye kuqikelelwa ukuba iza kuchukumisa i-35.45 yeebhiliyoni zeedola ngo-2027, kwaye ikhule ngesantya sokukhula sonyaka.CAGR) ye-21.9% phakathi kwe-2020 ukuya kwi-2027.
Iinkcukacha-manani zeMarike zoHlalutyo oluqikelelwayo: 2027
Kukho inani lemiba eqhubela phambili ukuthandwa kohlalutyo lokuxela kwangaphambili.
Itekhnoloji yogcino ayibizi kakhulu kwaye ihlaziywa, ivumela amandla okubamba kunye nokuhlalutya ngokukhawuleza i-terabytes yedatha.
Isantya sokuqhubekeka kunye nolwabiwo lwenkumbulo kwiiseva kunye neeseva ezibonakalayo (kwiiseva zonke) zibonelela ngamathuba okusebenzisa i-hardware ukuqhuba iimeko ezingenamda zokuqikelela idatha.
Iiplatform zidibanisa ezi zixhobo ngesantya esikhulu kwaye zenza itekhnoloji ibe lula kwaye ifikeleleke kwishishini eliphakathi.
Konke oku ngasentla kubonelela ngokuphakamisa okubalulekileyo kwiziphumo zephulo lokuthengisa, okukhokelela ekubuyiseleni ngokukhawuleza kutyalo-mali lweteknoloji (ROTI ifani).
Ukusetyenziswa koHlalutyo lokuQikelelayo kwiNtengiso ye-imeyile
Xa kuziwa ekuthengisweni kwe-imeyile, uhlalutyo oluqikelelweyo luxhasa umnikezeli wenkonzo ye-imeyile yombutho kwaye ludibanisa ukuqondwa kwexesha lokwenyani lokuziphatha kunye nedatha yabathengi yangaphambili ukwenza zombini ii-imeyile ezizenzekelayo kunye neyomntu. Inzuzo yayo eyongezelelweyo kukuba luncedo ekufumaneni kunye nokwakhiwa kobudlelwane ekugcinweni kwabathengi kunye ne-win-back campaigns ye-imeyile.
Nazi iindlela ezi-4 zokuqikelela uhlalutyo oluphucula izicwangciso zakho zephulo le-imeyile:
Ukufumana abathengi abatsha -Kuzo zonke ezinye iindlela, ithuba lokuveza iprofayili kunye nokuchonga abaphulaphuli abajongeka ngokufanayo yeyona ndlela ifanelekileyo yokuthengisa kwabo baza kuba ngabathengi. Uninzi lwee-injini zentengiso ziyakwazi ukungenisa iidilesi ze-imeyile kwiprofayile yabasebenzisi bakho ngokwedemografi, ngokwejografi, kwaye nangokusekwe kwizinto abanomdla kuzo. Emva koko, loo profayile (okanye iiprofayili) zingasetyenziselwa ukuthengisa kubathengi abanokubakho ngesithembiso sokubhalisela intengiso yakho ye-imeyile.
Ukwandisa iinguqu -Xa abathengi abanokuba ngababhalisi bokuqala ukufumana i-imeyile yokuthengisa evela kwinkampani, bafumana uthotho lwe-imeyile olwamkelekileyo kwibhokisi yabo yokungenayo. Injongo yayo kukubakhuthaza ukuba bathenge imveliso. Ngokufanayo, onke amathemba amatsha afumana ii-imeyile ezinjalo, kwaye ngamanye amaxesha intengiso esemgangathweni. Ngokuphumeza uhlalutyo oluqikelelweyo kuzo zombini iinkcukacha zabantu, kunye nedatha yokuziphatha, unokwahlula abathengi abanokubakho - ukuvavanya imiyalezo emininzi, kunye nezibonelelo - ukudala ulwazi, olufanelekileyo, kunye nee-imeyile ezenzelwe umntu ziphucula ukuguqulwa, kwaye wenze ingeniso.
Ukwakha ubudlelwane bokugcina abathengi -Uhlalutyo oluqikelelweyo lunokusebenzisa iinketho zeengcebiso zeemveliso zokubandakanyeka kwabathengi, kunye nokugcinwa. Le datha inokukunceda ukuba ujolise kubathengi abafanelekileyo abaye bathenga iimveliso zakho ngaphambili okanye baziphequlula kwiwebhusayithi yakho. Ukongeza iinkcukacha ezahlukeneyo ezifana nobudala, isini, isixa-odolo, indawo, njl njl. Kuyenzeka ukuchonga uhlobo lweemveliso abangathanda ukuzithenga kwixesha elizayo. Ngale datha, uthumela umxholo we-imeyile kwaye unikezela kubantu abalindelekileyo. Uhlalutyo oluqikelelwayo lukwaluncedo ekumiseleni ukuba abathengi bathenga rhoqo kangakanani na, ungaqonda elona xesha lifanelekileyo lokuthumela ii-imeyile zakho ezinxulumene nemveliso kubo.
Customer win-umva iqhinga – Ukuthumela a siyakukhumbula umyalezo kwi-imeyile kubo bonke abathengi emva kwexesha elithile ukusukela oko bagqibele ukuthenga imveliso. Ngoncedo lohlalutyo oluqikelelweyo, unokwenza ii-imeyile zokubuyisela umva, kwaye ufumane elona xesha lilungileyo lexesha lokuthumela ii-imeyile kubo, kwaye unikeze izaphulelo okanye inkuthazo zokuphinda uzibandakanye.
Ukuthengisa okuqikelelwayo sisixhobo esinamandla kubathengisi ukuba baqonde abaphulaphuli abajolise kubo kwaye bancede basebenzise isicwangciso esinamandla kumaphulo abo okuthengisa nge-imeyile. Ngale nto, unokukholisa ababhalisi bakho, kwaye ubaguqule babe ngabathengi abathembekileyo, ekugqibeleni okukhokelela ekwandeni kweentengiso.
tags: ukuthenga injongobhalainqanaba lotshintshoixabiso lokuphila kwabathengiwinback yomthengieCommerceemailemail Marketingabaphulaphuli bajonge ngokufanayoumxholo wakhoUhlalutyo oluqikelelweyoukuthengiswa kwangaphambili kwe-imeyileukuthengisa kwangaphambiliiingcebiso ngemvelisoumhla wokuthengaukufumana umrhumoukufunyanwa kwababhalisiumrhumo churn
UPrasanna yiNgcali ePhezulu ye-SEO kwi-Express Analytics. Unamava kwi-SEO, iMedia yeNtlalo, iBlogging, i-Intanethi yoLawulo lweSidima, iiNtengiso zikaGoogle, kunye noPhuculo lweVidiyo yeYouTube.